Ividiyo: Imithombo yeendaba yoLuntu kwiNguqu 3 | Martech Zone
Ividiyo: Imithombo yeendaba yeNtlalontle 3
NgoLwesithathu, Julayi 13, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Ngesizathu esithile, andidinwa kukubukela ezi vidiyo zimangalisayo zisuka Ezentlalo. Le nguqulelo yamva nje yevidiyo yeSocialnomics yapapashwa ngoJuni, 2011. I-Socialnomics yasekwa ngu-Erik Qualman ngenjongo yokubonelela ngeeNkcukacha zeNtlalontle nezeSelfowuni, iZifundo kunye neMimangaliso. Qiniseka ukuba ujonga ibhlog kaErik. Ndiyathemba ukumfumana kwi Itekhnoloji yeNtengiso yeNtengiso ngenye imini!
Ndiyonwabile… nangona, njengoko inye inkcazo ibonakalisile, batyhola i-Star Wars trilogy ngokupela u-Darth Vader ngokuchanekileyo.
UkuSebenza kweNjini yokukhangela iBhlog